China FD cofa unyawo 3027177 umzi mveliso kunye nabathengisi | Yoqobo
Yondla susa i-eccentric com.set
K2 UKUTHUTHA IPHEPHA 6201022
Cinezela i-FD ngeenyawo 3027177
Unyawo lokucinezela lwe-Yamato FD lunokuthiwa lolona nyawo lunzima lokucinezela kumzi mveliso womatshini wokuthunga. ubukhulu bendwangu, unyawo lokucinezela lunokwahlulahlulwa lube ziimpawu ezintathu zokuthunga izinto ezincinci, izinto eziphakathi kunye nezinto ezomeleleyo; Ngokwendlela yokusika kwengubo, inokwahlulahlulwa ibe ziinyawo ezinqunqiweyo. Kunye nonyawo olusikiweyo lokucinezela; Ngobubanzi be-cutter, inokwahlulahlulwa ibe lunyawo olubanzi lokucinezela kunye nonyawo olucekeceke lokucinezela; ithathela ingqalelo umahluko wokucinezelwa kweenyawo kwipleyiti yonyawo lwentwasahlobo, inqwaba yeenyawo zokucinezelwa ezahlukeneyo zinokucwangciswa kwaye zidityaniswe.
Elinye inqaku kukuqina konyawo lokucinezela, olubonakala ikakhulu kula manqaku mathathu alandelayo.
Okokuqala, isikhonkwane esidibeneyo kunye nomngxunya womngxunya. Ukujikeleza kunye nokucoceka okufanelekileyo kwezikhonkwane kunye nemingxunya kuyafuneka ukuba ibe phezulu.
Okwesibini izinto zonyawo lokucinezela.Ukucofa unyawo olucekeceke lwentwasahlobo kwepleyiti akunakucinywa, kwaye kunokuxhomekeka kubulukhuni bezinto ngokwazo ukuqinisekisa ukumelana nokunxiba kunye nokuqina.Ngoku nje sithenga izinto ezivela eJapan naseTaiwan.
Okwesithathu yinto yesixhobo sokusika, ngokufanayo neemfuno zesitshixo seplanethi yonyawo, ukuzinza kwesisiki nako kuxhomekeke kakhulu kwiipropathi zezinto ngokwazo kunye nonyango lomphezulu. Okwangoku sisebenzisa iincakuba ezenziwe eJapan naseTaiwan. Ukuqinisekisa ukomelela konyawo lwam lokucinezela kufikelela kwimeko efanelekileyo, okokugqibela yingxolo yonyawo lokucinezela.Ingxolo ngexesha lokusetyenziswa konyawo lokucinezela ixhomekeke kukuchaneka kwendibano yonyawo lwePhepha. Abasebenzi bethu bendibano baneminyaka ephantse ibe ngama-20 yamava endibano kwinkampani yeYAMATO. Inkqubo yendibano isebenzisa izixhobo ezininzi. Ukongeza, siphucule izixhobo zokucinezela iinyawo kwaye siphucula iingxaki zabathengi bethu. Okwangoku, umgangatho weenyawo zethu zokucinezela ungcono kunaseJapan naseTaiwan, kwaye uyathandwa ngokunzulu ngabavelisi bemishini yokuthunga ephezulu eTshayina.
Egqithileyo Impompo yeoyile ye-FD 3020480
Okulandelayo: ILooper, isitya seStich kunye nenja yokutya
Amalungu okuthunga Cofa iinyawo
Ukuqala kokuthunga i-Yamato Izixhobo zokuthunga i-Needl ...
Yamato FD Original eyongezwayo Hook Driving Sle ...
Ukuqala kokuthunga i-Yamato FD eyongezwayo yenja ...
Impompo yeoyile ye-FD 3020480